Photopheresis - ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုသခြင်း၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
Photopheresis – ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုသခြင်း၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
ဩဂုတ် 2, 2018 Pornchanok Iamsirirak, M.D. Professor Samart Pakakasama, M.D. Professor Suradej Hongeng, M.D.
ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုသခြင်းခံထားသော လူနာများအနေဖြင့် Graft vs Host ရောဂါ (GvHD) ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။ ထိုရောဂါသည် အလှူရှင်၏ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ သို့မဟုတ် peripheral blood stem cell များမှ လက်ခံသူ၏ ခန္ဓာအား သူစိမ်းဟု မြင်သောအခါတွင် လှူထားသော cell များ/ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ မှခန္ဓာကိုယ်အား တိုက်ခိုက်ဖို့ရန် ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ GvHD လက္ခဏာသည် ပြင်းထန်ကာကြာရှည်ဖြစ်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ကလေးများတွင် ပိုဖြစ်တတ်သည်။ သို့သော်လည်း photopheresis နည်းလမ်းအားဖြင့် ဤ အခြေအနေအား အောင်မြင်စွာ ကာကွယ်ခြင်း နှင့် ကုသခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Photopheresis သည် မည်သူတို့အတွက် ဖြစ်သနည်း?
Photopheresis သည် Graft Vs Host Disease (GvHD) ခံစားနေရသော လူနာများအတွက်ဖြစ်သည်။ ထိုရောဂါကြောင့် အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရနိုင်သည်။
မျက်လုံးများ နှင့် အရေပြားဝါခြင်း
ပင်ပန်းနွမ်းလျခြင်း သို့မဟုတ် ကြွက်သား အားနည်းခြင်း
Photopheresis မှာ မည်သည်ကို ခေါ်သနည်း?
Photopheresis သည် ကိုယ်ခံအားကောင်းစေခြင်းနှင့် GvHD လက္ခဏာများ ဖြစ်စေသော သွေးဖြူ ဥ တစ်မျိုးဖြစ်သည့် lymphocyte များအား ချုပ်ထိန်းပေးသော ကုထုံးဖြစ်ပါသည်။
Photopheresis လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အဘယ်သို့နည်း?
ရှေးဦးစွာ လူနာအား သွေးဖောက်ယူကာ သွေးဖြူ ဥများကို သွေးနီဥများမှ ဖယ်ထုတ်ပေးသော စက်ဖြင့် စစ်ဆေးပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် သွေးဖြူ ဥများ၏ သက်ရောက်မှုကို လျော့နည်းစေကာ လူနာ၏ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ အသစ်အား တိုက်ခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ Photopheresis လုပ်စဉ်တွင် သွေးဖြူ ဥများအား ဆေးရည်တစ်မျိုးဖြင့်ရောပြီးမှ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် ထိတွေ့စေပါသည်။ ဤ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပျက်စီးသွားသော cell များ ဖျက်ဆီးပြီးကြောင်းပြသည်။ထို့နောက် ထိုသွေးကို လူနာ၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို အကြောမှတဆင့် ပြန်သွင်းပါသည်။
ကုသမှုကြာချိန် သုံးနာရီ မှ လေးနာရီထိ ရှိပါသည်။ လူနာအများစုသည် photopheresis အကြိမ်များစွာလုပ်ရပြီး လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်အထိ ခြောက်ပတ်မှ ဆယ့်နှစ်ပတ်အထိကြာတတ်ပါသည်။ လူနာ၏ ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတညိပြီးကုသကြိမ်အရေအတွက်အား ဆရာဝန်မှ သတ်မှတ်ပေးပါမည်။
Photopheresis ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ အဘယ်နည်း?
Photopheresis လုပ်ပြီးသည့်နောက်လူနာသည်လက်ချောင်းများသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်း များတွင်တဆစ်ဆစ်စူးသကဲ့သို့စားရခြင်း၊ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ရီတီတီ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ပိုမိုပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်သွေးပေါင်ချိန်ရုတ်တရက်ကျခြင်းနှင့်အဖျားတက်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ဤကဲ့သို့ပြင်းထန်သောလက္ခဏာများ ဖြစ်ပါကဆရာဝန်အားချက်ခြင်း
အကြောင်းကြားသင့်ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသက်သာစေရန် ဆေးဝါးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Photopheresis ပြီးနောက် သတိထားရန် အချက်များမှာ အဘယ်နည်း?
လူနာတစ်ဦးအနေဖြင့် photopheresis လုပ်ပြီးနောက်အဓိကရှောင်ရှားရန်အချက်မှာနေရောင်ခြည်နှင့် ထိတွေ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အပြင်ထွက်လျှင် sunscreen လိမ်းရန် နှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်သောနေကာမျက်မှန်များ တပ်ရန်အကြံပြုထားပါသည်။
ဆစ်မီတဝေ့ကလေးဆေးရုံသည် ၁၀ ကီလိုဂရမ်အထိ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နည်းသော အသက် နှစ်နှစ်အရွယ်အထိ ငယ်သော ကလေးများအား ကုသပေးနိုင်သည့် photopheresis စက်ရှိသော အာရှပစိဖိတ် ဒေသရှိတစ်ခုတည်းသောဆေးရုံဖြစ်ပါသည်။ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံရှိရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသခြင်း ပရိုဂရမ် တွင် photopheresis အသုံးပြုရန် အထူးသင်တန်းပေးထားသော အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြု များ နှင့် အကူဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ဆေးရုံတွင် သီးသန့်အခန်း ပါဝင်ကာ HEPA ကြားခံများ နှင့် ခွဲစိတ်ခန်းတွင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီထုတ်သော နေရာ၄ခုရှိကာ လူကြီးနှင့် ကလေးများအတွက် အဆင့်မြင့် ပြင်ပလူနာဆေးခန်းပါရှိပါသည်။
Photopheresis - ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုသခြင်း၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုသခြင်းခံထားသော လူနာများအနေဖြင့် Graft vs Host ရောဂါ (GvHD) ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါသည်။ ထိုရောဂါသည် အလှူရှင်၏ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ သို့မဟုတ် peripheral blood stem cell များမှ လက်ခံသူ၏ ခန္ဓာအား